Indlela yokuxabana nokwakhana ngendlela efanele ukuze ulondoloze ubuhlobo - Psychology 2022
Indlela yokuxabana nokwakhana ngendlela efanele ukuze ulondoloze ubuhlobo
Indlela yokuxabana ngendlela efanele
Indlela yokubeka kahle
Awukho umbhangqwana owodwa ongaphila ngaphandle kwezingxabano. Kubalulekile ukuthi i-spit iphela ngokushesha kangakanani nokuthi izoqhubeka kanjani.
UDave Cowley, uprofesa wezengqondo eNyuvesi yaseWashington, uneminyaka engaphezu kwengu-30 yokuzijwayeza kwangasese. Usiza imindeni enezingxabano futhi ayifundise ukuthuka inhlamba ngendlela efanele. Ngenxa yakhe, inqwaba yemibhangqwana yahlala ebuhlotsheni obujabulisayo.
Engxabanweni, uprofesa ukholelwa ukuthi, into esemqoka ukungasho kakhulu futhi ungashiyi ingxabano ingabonakali. Ngakho-ke, kunemithetho eminingana enqatshelwe ukudlula.
Ningaxabani phambi kwezingane nabanye. Kuyinto engenakwenzeka ngokuphelele ukulahlekelwa igunya lomlingani emndenini, lokhu kuzothinta izinkinga zokukhuliswa esikhathini esizayo futhi kubangele izingxabano ezintsha zangaphakathi komndeni.
Okufanayo kusebenza kulabo abakuzungezile: okokuqala, ukuxabana kwakho akunyakazisi muntu futhi kubukeka kungathandeki, futhi okwesibili, ukuheha abangani ohlangothini lwakho, ungaphendukela umlingani wakho ngokumelene nabo, futhi lesi yisizathu esisha sokungqubuzana.
Sebenzisa izinkulumo ze-I kuphela. Esikhundleni sokuthi "wena" nixabene, beka wonke umushwana ngezicelo zakho usebenzisa okuthi "Mina".
Ngifuna ukuthi ishalofu libethelwe phansi, angifuni ukuya kokosa inyama ngoMgqibelo, anginayo ithoni yengxoxo. Lokhu kuzophuca umlingani ngokushesha indawo yokuzivikela. akasolwa ngalutho.
Ungakhumbuli ukungezwani kwangaphambilini. Lapho ingxabano iphela, iyaphela. Ngaphandle kwalokho, ukuthula phakathi kwenu ngeke kubize lutho futhi, empeleni, nizoba sesimweni sokuxabana okungapheli. Ngakho-ke, kungcono ukuthi ungalokothi ukhumbule ukungezwani kwangaphambilini, ikakhulukazi ngesikhathi sokuxabana, lapho ufuna kanjalo.
Ungasebenzisi imishwana enqatshelwe. Kunezinto ongasoze wazixolela. Lawa ngamazwi aluhlaza mayelana nomndeni, isibalo, ingcebo yezinto ezibonakalayo kanye nocansi.
Thatha isikhathi. Akufanele ufune intethelelo ngokushesha ngemva kwengxabano enobudlova. Bobabili kufanele baphumule futhi bacabange ukuthi yiziphi izinto ezincane ezifanayo eziyizizathu zokuxabana nokuthi nithandana kanjani.
Ebudlelwaneni obuvumelanayo, akusho lutho ukuthi ubani owokuqala oqhamuka nokubuyisana. Uzwa sengathi umlingani naye usekulungele. Uma ungekho umuzwa onjalo, futhi ngaso sonke isikhathi kufanele ucele intethelelo kuqala, mhlawumbe awumniki isikhathi sokuphola ngokwanele.
Yenza ukuvumelana. Wonke umuntu ufuna ukuzizwa elungile, kodwa othandekayo wethu ungumuntu onezifiso zakhe. Ngemuva kwengxabano, ngesikhathi sesivumelwano, kubalulekile ukuthi uvume futhi wamukele imvume yakhe ukuze uthole isisombululo esivumelana nobabili.
I-kinesthetic eyengeziwe. Into ebaluleke kakhulu ngesikhathi sokubuyisana ukwanga nokuphulula umlingani wakho. Ukuxabana kwenzeka ngamazwi, futhi ukuthula kuthinta umzimba, ngakho-ke kuzobonakala njengokubaluleke kakhulu ngamandla.
Kuhle ukuqeda impi ngocansi, kodwa hhayi wonke umuntu, kungenjalo kuzoba umkhuba omubi ukufudumala inkanuko.
Lapho ungakwazi ukubekezelela. Kunezimo ezinhlanu lapho kungadingeki khona, kungafuneki, noma kunqatshelwe ukukubekezelela. Yona:
Kuzo zonke ezinye izimo, ukuxabana nokubuyisana kungaba futhi kufanele kube.